10 Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Islandy > 10 Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Portugal, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe, Travel Islandy
Morontsiraka fasika, fahitana hantsana, rano manga mangarahara, ary vondrom-piarahamonina surf mahafinaritra, Ireto 1o itodiana toerana fialokalofana epika indrindra any Eropa ireto dia tonga lafatra ho an'ny mpizaka amin'ny ambaratonga rehetra. Avy amin'ny morontsiraka italiana ka hatrany Danemark lavitra, ary Portugal, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Godrevy Beach, England
Rehefa mety ny fotoana, mety mitaingina sisa tavela sy zona maharitra eto ianao. Eny, Ny tora-pasika Godrevy amoron'ny Atlantika dia iray amin'ireo toerana onjampeo epika indrindra any Eropa. Any Cornwell no misy azy, iray amin'ny ny tanàna amoron-tsiraka indrindra any Eropa, ity tora-pasika ity dia tena ankafizin'ny vondrom-piarahamonin'ny surf.
Godrevy beach dia ao amin'ny St Ives Bay, ary amin'ny fahavaratra, ho hitanao eto ny maro amin'ireo mponina ao aminy fahavaratra fety. Milentika amin'ny masoandro matetika, fananganana lapa ao amin'ny masoandro, na mankafy ny jiro, tsy mahalala fa Godrevy dia manolotra ny sasany amin'ireo fivontoana tsara indrindra any Eropa.
Rahoviana: lohataona, Aprily ho an'ny onja madio.
2. Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa: Peniche Portugal
Ora iray avy amin'ny seranam-piaramanidina Lisbonne, ny toerana fitsangantsanganana epika faharoa any Eropa dia miandry anao any Portugal. Peniche dia saikinosy iray eo amin'ny morontsirak'i Portugal, izay miteraka fepetra lehibe ho an'ny onja malaza mandritra ny taona. Ary, Ny morontsirak'i Portugal dia misy ny morontsiraka nofinofy indrindra any Eropa.
Tapaka ny teboka manaitaitra, haran-dranomasina, ho fanampin'ny torapasika lava mahavariana, ataovy any an-danitra i Peniche. Raha Peniche kosa dia saikinosy, misy mihoatra noho ny 30 surf eo amin'ny morony, ary toerana be dia be hanofana fitaovana enti-manao surf. Ny zavatra iray tokony hotadidina dia ny mila akanjo lava mandritra ny taona, noho ny hafanan'ny rano mangatsiaka.
Rahoviana: Septambra ka hatramin'ny Oktobra
Aiza: Foz do Arelho dia fasika mahavariana avaratry Peniche ho an'ny vao manomboka sy ny mahatsara azy, misaotra ny fahazoana miditra amin'ny filaharana. Ny moron-dranomasina manga Supertubos no toerana handehananao ny onja malaza indrindra any Eropa, fast and Furious. Noho izany, raha tsy hoe mpitsangatsangana za-draharaha ianao, ity onja ity dia hampidina anao mafy.
ahevaheva: 80 cm hatramin'ny 2.6 M.
3. Bundoran, Irlandy
Amin'ny morontsiraka mahatalanjona eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana sy amoron-tsiraka mba handeha, Ny faritr'i Donegal dia iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra any Irlandy. Ny tanànan'ny Bundoran any Irlandy dia iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana tsara indrindra any Eropa ho an'ilay mpialokaloka avo lenta.
Bundoran is home to the most famous waves, ny Havoana. Ny havoana dia havia lavorary, matanjaka sy fohy kokoa. Noho izany, aorian'ny mitaingina ny onja tonga lafatra dia afaka mahazo pint ianao ao amin'ny trano fisotroana eo an-toerana, miaraka amin'ireo mpizaka tany an-toerana.
Fa: surfers efa mandroso.
ahevaheva: o.50 ka 2.7 M.
4. Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa: Klitmoller, Danemark
Sambo fanjonoana, surfers, ary ny morontsiraka fasika mihaona amin'ny Ranomasina Avaratra izay miakatra no ho hitanao ao Klitmoller. Ity rafitra ary toetr'andro no nahatonga ny tanàna kelin'i Klitmoller hanana anarana hoe "Cold Hawaii”.
Ho fanampin'ny surf, Klitmoller dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hanaovana fitsangantsanganana rivotra any Eropa Avaratra. Noho izany, azonao atao ny mpitafa onja mitaingina onja mandavantaona. Zavatra iray hafa mahatalanjona momba an'i Klitmoller dia ny akaiky anao valan-javaboary ary ny tranombakoka, izay ahafahanao mahazo aingam-panahy avy amin'ny tantaran'i Viking, alohan'ny hisamborana ny onja tonga lafatra.
Rahoviana: taona rehetra manodidina.
Nahoana: toetrandro tonga lafatra, ho an'ny surf rehetra, mandavantaona.
Ny morontsiraka any Biarritz dia sasany amin'ireo morontsiraka mampitsangam-bolo indrindra eto Frantsa, avelao ihany i Eropa. Ary noho izany, tsy mahagaga raha Biarritz dia toerana fitetezam-paritra malaza any Eropa. Ny onja La Graviere dia manintona mpitaingin-tsoavaly eran'izao tontolo izao mankany amin'ny Atlantique Pyrenee amin'ny fikatsahana aorian'ny onja tonga lafatra.
Raha ny Hossegor dia manintona ireo mpitsidika amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina, ny vondrom-piarahamonin'ny surf eto dia iray amin'ireo tsara indrindra any Eropa. Noho izany, afaka mahazo fahitana amin'ny onja tonga lafatra amin'ny kafe sy croissant avy amin'ireo mpomba ny Surf any Frantsa ianao. Ankoatry ny, Hossegor mpampiantrano ny fitsidihana an'izao tontolo izao WSL isan-taona hetsika.
Fa: surfers amin'ny ambaratonga rehetra sy amin'ny karazana tabilao rehetra.
Nahoana: Fiatoana amoron-dranomasina matevina.
Rahoviana: Fararano ka hatramin'ny lohataona, manomboka amin'ny tapaky ny volana oktobra dia mihidy ny tanàna, ary ny onja dia miakatra hatrany amin'ny epic la Grave. Noho izany, azonao atao ny manomana ny dianao mankany amin'ity toeran'ity surf ity, ary mijanona amin'ny hotely na karajia voahofa amoron-dranomasina.
Haben'ny onja: 0.5 ny 2.5 M.
6. Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa: Island Of Lewis, Scotland
Any amin'ny avaratra dia mihaona amin'ny Atlantika, onja mahery sy rivotra mahery, mamorona ny seha-pihetsiketsika be indrindra any Ekosy. Ny Nosy Lewis ao amin'ireo nosy Atlantika Outer Hebrideana mifandray dia iray amin'ireo lehibe indrindra toerana tsara tarehy any Ekosy.
Ary noho izany, Isle of Lewis dia paradisa onja, fa ho an'ny mpizaka surf mandroso ihany. Ny onja mahery dia tsy natao ho an'ny vao manomboka izay mbola miady mafy ny hidy sy hiditra amin'ny sisa sy ny zo.
Rahoviana: fararano sy ririnina.
Windsurfing, kitesurfing, na zon'ny surf, The Hague dia toerana tsara handehanana amin'ny fialantsasatra amin'ny fitetezana, a fiaran-dalamby nankany lavitra an'i Amsterdam. Na dia mety ho toa ny volondavenona volondavenona sy tsy mandray aza izany, fa ho an'ny surf, mamorona ny toe-piainana tonga lafatra amin'ny mitaingina onja tonga lafatra izy io.
Azonao atao ny misolifatra mamontsina rehetra manerana ny morontsiraka 11-kilometatra, indrindra amin'ny morontsirak'i Scheveningen. Eto, hahita surfers amin'ny ambaratonga rehetra sy fivarotana sy fotodrafitrasa tsara indrindra ianao.
Hamaranana, Ny Hague dia fantatra amin'ny asany politika eto amin'izao tontolo izao, io no iray amin'ireo toerana onjampeo epika indrindra any Eropa.
8. Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa: San Sebastian, Espaina
Eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Frantsa sy Espana, ao amin'ny Country Basque, San Sebastian dia tanàna amoron-dranomasina mahatahotra, miaraka amin'ireo teboka surfing epic. Eto, hitsambikina avy eo amin'ny onja ka hatrany amin'ny bara fitety ianao, ary avy eo miala sasatra eo amin'ny morontsiraka fasika any amin'ny iray amin'ireo tanàna espaniola tsara tarehy indrindra.
Cantabria dia manana moron-dranomasina mahafinaritra sy toerana misy surf, toy ny morontsirak'i Zurriola, ny moron-dranomasina farany surf any San Sebastian. Mety indrindra ho an'ny mpanafika manomboka sy mpanelanelana. Na izany aza, ho an'ny fomba fijery mahafinaritra, zahao ireo onja ao amin'ny morontsirak'i La Concha.
Nahoana: sisa tavela any amin'ny bay bay.
ahevaheva: fako tsara manodidina ny avaratra andrefana.
Rahoviana: Novambra ka hatramin'ny Desambra.
9. Watergate Bay Angletera, Sennen Cove
Watergate Bay no toerana hipetrahana any UK, ary mpanafika an-jatony izay manatrika ny fiadiana ny tompondaka nasionaly amin'ny surf amin'ny anglisy no hanaiky. Malaza be eto ny surf sy ny fitetezana rivotra sy ny onja-onja, fanaovana Watergate Bay iray amin'ireo 10 ny ankamaroan'ny toerana fitetezana epika any Eropa.
Sennen Cove ao Cornwell dia torapasika sy toerana onja mahafinaritra hafa. Sennen Cove sy Praa Sands dia toerana fialofana mahafinaritra miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra.
Nahoana: ny rivotra sy ny fisokafana dia mety indrindra amin'ny surf amin'ny sehatra rehetra.
10. Toerana fitsangantsanganana epika indrindra any Eropa: Sardinia, Italia
Ny nosy italiana Sardinia tsara tarehy dia manidy ny 10 ny ankamaroan'ny toerana filalaovana epika ao amin'ny lisitr'i Eropa, miaraka amin'ny Ranomasina Mediterane sy ny morontsiraka fasika. Eto, afaka misambotra onja kely na antonony ianao, na onja mahery any amin'ny faritra andrefana. Ary, amin'ny 300 andro tonga lafatra, Sardinia dia paradisa onja.
Na izany aza, raha te-hivezivezy mivaivay ianao, avy eo alamo ny fialan-tsasatra ataonao any Sardinia, ny volana novambra ka hatramin'ny janoary. Costa Verde, Buggero any San Nicolo, ary Porto Ferro any Alghero dia 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
Rahoviana: Septambra ka hatramin'ny Novambra, na Martsa ka hatramin'ny Mey.
ahevaheva: 3-4 M.
amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy amin'ny famolavolana drafitra fialan-tsasatra mahafinaritra any 10 ny ankamaroan'ny toerana fitetezana epika any Eropa. Ny fitsangatsanganana an-dalamby mankany amin'ny toerana haleha sy trano tsy ampoizina lavitra ny trano no fomba fitetezana haingana sy mora indrindra.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 Toerana Epic Surf indrindra any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)